Abuuri sanduuqyada maalgashiga adiga oo ku xiran shuruudaha aad u aragto muhiim. Xulo dukumiintiga maalgashiga adoo raacaya shuruudahaaga: kobaca qiimaha saamiyada, saamiyada suuqyada ee shirkadaha, saadaasha sanadlaha ah, warbixinnada maaliyadeed ee faa'iidada, iwm.
Sicirka qiimaha kacay:
Xakamee xulashada shirkadaha ay saamiyadu kor u kacday muddadii la doortay.
Deeq-bixiyeyaasha la bixiyo: *
Lacag-qaadasho - mushahar, laga xisaabiyo faa'idada shirkadda oo ay bixiso go'aanka shirkada saamileyda ah. Bixiyeyaasha waxay badanaa u taagan yihiin lacag caddaan ah, laakiin sidoo kale waxaa lagu soo saari karaa qaabka saamiyada ama hantida kale.
Waddanka ama Dhaqaalaha
Ku xaddid saamiga shirkadaha in ay juqraafi ama meel is-dhaafsadaan halka saamiyada shirkadu ay tahay mid ganacsi.
tan iyo markii:
tan iyo toddobaadkii hore
tan iyo bishii hore
3dii bilood ee la soo dhaafay
tan iyo sanadkii hore
3dii sano ee la soo dhaafey
Xilliga lacag bixinta:
lixdii biloodba mar
hal mar rubuc
marar badan 4 jeer sanadkii
Laga soo bilaabo aduunka oo idil Argentina Australia Awstaria Belgium Boqortooyada Ingiriiska Brazil Bulgaariya Chile Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Faransiiska Filibiin Finland Germany Greece Hindiya Hong Kong Hungary Imaaraadka Carabta Indonesia Ireland Israa'iil Iswiidhan Japan Kanada Koonfur Afrika Latvia Lithuania Luxembourg Macedonia Malaysia Maraykanka Mexico Morocco Netherlands New Zealand Norwey Pakistan Poland Portugal Russia Shiinaha Singapore Sirilaanka Slovenia South Korea Spain Switzerland Taiwan Talyaaniga Tayland Turkiga Venezuela Vietnam Yurub AMS (Amsterdam Isbedelka) ASE (Suuqa suuqa NYSE (Amex)) ASX (Australian Stock Exchange) ATH (Athens Stock Exchange) BCN (Barcelona Stock Exchange) BDP (Budapest Hantida Stock) BER (Berlin Stock Exchange) BKK (Thailand Stock Exchange) BMF (Isdhaafsiga Brazil ee 'Mercantile & Futures Exchange') BRN (Berne eXchange) BRU (Euronext Brussels) BSE (Bombay Stock Exchange) BTS (BATS Global Suuqyada) BUE (Buenos Aires Stock Exchange) BUL (Suuqa Barta) BVC (Columbia Stock Exchange (Bolsa de Valores de Columbia)) CBT (Guddiga Ganacsiga ee Chicago) CCS (Caracas Stock Exchange) CME (Chicago Ganacsi Lacageed) CNQ (CNQ) COL (Colombo Stock Exchange) CPH (Kobanheegan Stock Exchange) CSC (Barafka Mareykanka) CSE (Hantida Stock Exchange) CYP (Cyprus Stock Exchange) DME (Dubai Iibsiga Ganacsiga) DUB (Irish Stock Exchange) DUS (Dusseldorf Stock Exchange) ENX (Gawaarida Euronext) EUX (Eurex) FRA (Frankfurt Stock Exchange) FUK (Fukuoka Stock Exchange) GER (XETRA Stock Exchange) HAM (Hamburg) HAN (Hanover) HEL (Helsinki Stock Exchange) HKF (Shirkadda Hong Kong Futures Exchange) HKG (Hong Kong Stock Exchange) HSX (HoChiMinh Stock Exchange) ICE (Mustaqbalka Ice Europe) IOB (Buuga Dalbashada Caalamiga ah) ISE (Irish) IST (Istanbul Stock Exchange) JKT (Jakarta Stock Exchange) JSD (JASDAQ Qiimaha Suuqa) JSE (Johannesburg Stock Exchange) KDQ (KOSDAQ) KFE (Kootada Waqooyiga Kuuriya (KOFEX)) KLS (Is-weydaarsiga Malaysia) KOE (KOSDAQ) KSA (Karachi) KSC (Kuuriyada Kalluunka) LBC (Casablanca Stock Exchange (Bourse de Casablanca)) LIS (Euronext Lisbon) LJE (Ljubljana Stock Exchange) LSE (London Stock Exchange) LUX (Lacagta Lacagta ah ee Luxembourg) MAC (Macaamiisha Hantidhowrka Macmiisha) MCE (Madrid Stock Exchange (Mats)) MCX (Macaamil Mooshin ah (MOEX)) MDE (Iskuduwaha Waddanka Malaysia) MEX (Mexico Stock Exchange) MFM (Mercado Espanol de Futuros Financieros (MEFF)) MIL (Milan Stock Exchange / Borsa Italia) MSE (Montreal Stock Exchange (Bourse de Montreal)) MUN (Munich) NAG (Nagoya Stock Exchange) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NJM (Hercules Stock Exchange) NMS (NASDAQ) NSE (Bangiga Dhexe ee Hindiya) NYM (New York Mercantile Exchange (NYMEX)) NYQ (NYSE) NYS (NYSE) NZE (New Zealand Stock Exchange) OBB (Suuqa Barta Soodhaweynta OTC) OMX (Hal Chicago) OPR (OPRA) OSE (Osaka Securities Exchange) OSL (Oslo Bors) PAR (Euronext Paris) PCX (NYSE Arca) PHS (Philippine Stock Exchange) PNK (Waraaqo casaan) PRG (Hantida Stock Exchange) RSE (OMX Baltic) SAF (Iskuduwaha Maalgalinta Koonfur Afrika) SAO (BOVESPA - Sao Paolo Stock Exchange) SES (Singapore Exchange) SET (Hantida Suuqa Thailand) SFE (Maalgashiyada Australian Stock Exchange) SGO (Santiago Stock Exchange) SGX (Singapore Isukeenada Waafajinta Clearing Ltd.) SHA (Shirkadda Shanghai Stock Exchange) SHE (Shenzhen Stock Exchange) SHH (Shirkadda Shanghai Stock Exchange) SHZ (Shenzhen) STO (Stockholm Stock Exchange) STU (Stuttgart Stock Exchange) TAI (Australian Stock Exchange) TAL (OMX Baltic Exchange - Talinn) TLV (Tel Aviv Stock Exchange) TOR (Toronto Stock Exchange) TSE (Tokyo Stock Exchange) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (Iskuduwidda Waddanka Toronto) VIE (Vienna Stock Exchange) VSE (OMX Baltic Exchange - Vilnius) VTX (Lix Jeer) WAR (Warsaw Bixin Bixin) ZSE (Zagreb Stock Exchange)
Fursadaha kale: *
Dakhliga saafiga ah waa inuu keenaa shirkado faa'iido leh sida ku cad warbixinta ugu dambeysa ee dakhliga. Deynta aan lahayn - inay shirkado keenaan deyn la'aan bangiyada ama gobolka. Dhamaan qiimaha waxay ku jiraan dollarka - saamiyada shirkadaha waxaa lagu iibiyaa lacago kala duwan, si loo fududeeyo isbarbardhig, dhammaan qiimaha waxaa loo bedeli doonaa doolarka Mareykanka.
Dakhliga saafiga ah ee wanaagsan
Deyn laguma laha
Dhammaan qiimaha USD
✔ 68166 saamiladoodu waxay buuxiyeen shuruudaha
Waxqabadka dhaqaalaha: *
Xogta saadaasha iyo saadaalinta maaliyadeed looma helayo dhammaan shirkadaha.
Dakhliga saafiga ah
Kharashka R & D
Qadarka lacag bixinta
Abaalmarin kasta oo wadaag ah
* Xogta saadaasha iyo saadaalinta maaliyadeed looma helayo dhammaan shirkadaha.
Muuji TOP 200 saamiyada
Saamiyada saamiga shirkadaha. Xaggee lacag lagu maalgeliyaa? - mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan ee khadka tooska ah ee shabakadda allstockstoday.com
Halkee maalgashigu waa su’aasha ugu muhiimsan ee dhammaan maalgashadayaasha. Way iska cadahay inay faa'iido u leedahay in la maalgashado saamiyada shirkadaha si isdaba joog ah u koraya oo aan khatar ku jirin qiimaha. Faa'iidooyinka maalgashiga ayaa sidoo kale lagu go'aamiyaa qadarka iyo joogtada ah ee bixinta saami qaybsiga.
Laakiin marka lagu daro cabbiraadaha noocan ah, waxaa jira astaamo badan oo badan oo shirkadaha ku jira isweydaarsiga saamiyada oo saameyn ku yeelan kara su'aasha: "Halkee maalgashi lagu sameeyaa?"
Adeeggeenna qiimeynta saamiyada shirkadaha is-weydaarsiga saamiyada adduunka, waxaan xisaabta ku darsannaa tusayaasha maaliyadeed ee soo socda ee shirkadaha:
Qiimaha saamigu kor ma u kacay
Marka saamiga la bixiyo
Shirkadaha leh daqliga saafiga ah
Muddadii ay kor u kacday qiimaha saamiyada ee shirkadu ku leedahay sarrifka saamiyada
Waxqabadka dhaqaalaha ee shirkadda - daqliga saafiga ah
Waxqabadka dhaqaalaha ee shirkadda - wadarta hantida
Waxqabadka dhaqaalaha - isugeynta dakhliga
Kala qaybinta dhalidda
Tirada lacag bixinta
Qiimaynta saamiyada khadka tooska ah ee laga helo faa'iidada maal gashigu waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku shaandheeyso liiska shirkadaha saamiyada ee xuduudahan.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad u abuuri kartaa aalad aad u leedahay shirkad kasta qiimeynteena si aan ula socono khadka tooska ah ee internetka haddii ay tahay mid faa'iido leh in lagu maalgashado.
Macluumaadka adeegga “Saamiyada saamiga shirkadaha. Xaggee lacag lagu maalgeliyaa?” waxaa laga soo qaatay ilo furan oo la isku halleyn karo isla markaana cusboonaysiinta waqtiga dhabta ah.
Qiimaha saamigu kor u kacay?
Qiimaha saamigu kor u kacay? - goobta shaandhada ee adeegyadeena oo kuu oggolaanaya inaad xadido xulashada shirkadaha saamiyadoodu ay kor u dhaafeen waqti la xushay.
Muuji inaad xiiseyneyso shirkado ay saamiyadoodu kordheen, waad awoodaa waqtiyo kala duwan.
Markaa shaandhayntayada “Qiimaha saamiyada ma kordhay” wuxuu kuu oggolaanayaa inaad doorato shirkad saamigeeda saamiga ku kordhay muddada: laga bilaabo toddobaadki ugu dambeeyay, bishii ugu dambeysay, 3 bilood ee la soo dhaafay, sanadkii la soo dhaafay, 3 sano ee la soo dhaafay.
Marka saamiyada la bixiyo, tani waa mid muhiim ah oo muhiim u ah maalgashade kasta.
Qaybinta - gunnada waxaa lagu xisaabiyaa macaashka shirkadda waxaana lagu bixiyaa go'aanka kulanka saamileyda shirkadda. Lacag bixintu inta badan waa lacag bixinno.
Shaandheyntayadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato shirkadaha bixiya ama aan bixinin saami qeybsanaan.
Kuwa wax bixinayaana waxay dooran karaan waqtiga ay shirkaduhu wax u qeybsanayaan.
Kala sooca saami qaybsiga ee shirkadaha saamiyada adduunka waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku doorato shirkad inta jeer ee lacagaha la bixiyo: sanadkii hal mar, hal mar lixdii biloodba mar, rubuc hal mar, badanaa 4 jeer sanadkii.
Shirkadaha Dakhliga saafiga ah
Shirkadaha leh daqliga saafiga ah waa shirkadaha ugu guulaha badan adduunka.
Dakhliga saafiga ah ee joogtada ah ee shirkadda waa riyada maamulaha sare ee shirkadda iyo maalgashade kasta.
Shaandhaynta adeeggeena ayaa kuu oggolaaneysa inaad doorato shirkad leh daqli saafiya oo ka timaadda dhammaan shirkadaha adduunka oo aad u tixgeliso kaliya inay yihiin codsadeyaal maalgashi.
Muddada Kororka Qiimaha Suuqa
Waqtiga kor u kaca qiimaha saamiyada ee shirkadu ku leedahay sarrifka saamiyada ayaa ah astaamaha ugu weyn ee xasilloonida faa'idada shirkadda. Haddii shirkaddu si joogto ah u shaqeyso oo ay si joogto ah u muujiso macaash, markaa saamiyaasheeda ayaa si joogto ah u koraya.
Mudada koritaanka joogtada ah ee macaashka shirkadu way kala duwanaan kartaa. Waqtigaan dheer, waxaa sii kordhaya qiimaha shirkadda.
Adeeggeenu wuxuu suuro gal ka dhigayaa in la kala saaro liiska shirkadaha marka loo eego muddada korodhka qiimaha: 3dii sano ee la soo dhaafay, sanadkii la soo dhaafay, 3dii bilood ee la soo dhaafay, bishii la soo dhaafay, iyo usbuucii la soo dhaafay.
Waxqabadka dhaqaalaha, dakhliga saafiga ah
Waxqabadka shirkadda, sida dakhliga saafiga ah, waa tirada guud ee dakhliga shirkadda inta lagu jiro xilliga warbixinta ee cayiman oo laga jaray dhammaan kharashyada iyo canshuuraha.
Tilmaanta maaliyadeed “Dakhliga saafiga ah” ayaa inta badan saameyn ku leh bixinta saami qaybsiga.
Dakhliga saafiga ah ee shirkaddu sidoo kale wuxuu saameeyaa koboca mustaqbalka ee saamiga shirkadda ee suuqa saamiyada.
Tilmaamayaasha maaliyadeed ee shirkadda, wadarta hantida
Waxqabadka dhaqaale ee shirkadda. Wadarta tirada hantida ayaa ah tilmaame sheegaysa sida ay u weyn tahay uguna kalsoon tahay shirkaddu.
Wadarta hantida shirkadda waa sanduuqa bixiya qiimaha saamiga.
Sida caadiga ah, wadarta qiimaha saamiyada shirkaddu marna kama hoos dhacdo wadarta guud ee hantida ururka ee ku saabsan is-weydaarsiga saamiyada.
Waxqabadka dhaqaalaha, dakhliga guud
Waxqabadka dhaqaalaha. Wadarta dakhliga shirkadda waa cadadka lacagta laga helo akoonnada shirkadda muddada warbixinta ee la xushay.
Wadarta daqliga shirkada ayaa ah calaamad aasaasi ah oo la fahmi karo oo ku saabsan waxa noqon doonta macaashka shirkada waqtiga warbixinta iyo waqtiga soo socda.
Adeeggeena khadka tooska ah ee shirkadaha qiimeynta ee ku saabsan is-weydaarsiga saamiyada, waxaad shirkadaha ugu kala saari kartaa tilmaame "guud ahaan dakhliga shirkadda".
Kaabayaasha shirkaddu waa wadarta qiimaha dhammaan saamiyada ololaha.
Aasaaska shirkada waa xudunta ugu horeyn ee ka hadleysa cabirka shirkada. Shirkadaha waad ku kala saari kartaa sicirka "kambuyuutarrada shirkadda".
Sida caadiga ah, suuqa caalamiga ah, tilmaamayaasha caasumada ee shirkadaha adduunka waxaa loo arkaa doolar.
Kala qaybinta dhalidda - dakhliga laga helo qayb kasta oo ah maalgashi lagu maalgaliyay qayb kasta, oo lagu go'aamiyo xaddiga saami qaybsiga lagu bixiyay saamikan.
Saami qaybsiga, oo ay weheliso isbeddelka sicirka saamiga muddada warbixinta, ayaa ah faa iidada uu maal-gashade ku maal gashanayo saamiga shirkaddu heli doono.
Laakiin tilmaameha "saami qaybsiga" inta badan way ka xasilloon tahay sicirka saamiga. Maalgelinta muddada-dheer, waxay si sax ah u tahay saami qaybsiga taas oo ah tusaha ugu weyn ee kaqeybgalayaasha suuqa saamiyada inay maalgashi ku sameystaan ​​shirkadda.
Qaybi lacagta qadarka
Xaddiga bixinta saami qaybsigu waa isugeyn tusmo u ah shirkadda oo dhan iyo go'aaminta inta lacag ee ku baxday bixinta dhammaan saamiyada shirkadda.
Xaddiga lacag-bixinnada saami-qaybsiga ayaa xiiso leh marka lagu daro macaashka guud ee shirkadda iyo qiimaha hal saami.
Adeegga qiimeynta saamiyadeena, waxaad dooran kartaa hab lagu kala sooco tilmaameha “Qaybta lacagta lagu bixiyo”.
Dakhliga saamigiisu waa - mid ka mid ah tusmooyinka ugu waaweyn ee maalgashadayaasha suuqa saamiyada.
Dakhliga saami qaybsiga - wadarta macaashka shirkadda, ee loo qaybiyay tirada saamiyada shirkadda oo dhan ee ku qoran is-weydaarsiga saamiyada.
Waxaad ku kala saari kartaa liiska shirkadaha aad u baahan tahay adigoo adeegsanaya astaamaha "dakhliga ku soo gala qayb kasta" si aad u aragto shirkadaha ugu macaashka badan.